Samsung Galaxy M12 yakatangwa: Magadzirirwo uye maficha
Samsung Galaxy M12 yakazovhurwa. Iyo smartphone yakanyorwa pane iyo kambani yeVietnam webhusaiti pasina kuburitsa mutengo. Iyo Galaxy M12 yaifungidzirwa kuvhura munguva pfupi uye tipster OnLeaks yeZwi rakagovaniswa mufananidzo unoshandura yeiyo smartphone pakutanga kwemwedzi uno.
Samsung Galaxy M12 iri pakati peshanu smartphones iyo kambani inotarisirwa kuzivisa mumazuva anotevera. Kunze kweGalaxy M12 uye Galaxy M02, izvo zvakatoita kutanga kwavo muna Ndira; Samsung inogona kufumura Galaxy F62, Galaxy A52, uye Galaxy A72 munguva pfupi, sekureva kweshumo reSamMobile.
Samsung Galaxy M12 inowanikwa muElegant Blue, Inokwezva Nhema, uye Trendy emerald Green mavara sarudzo. Pakati peakakosha maficha eiyo smartphone pane 6,000mAh bhatiri, quad-kumashure kamera setup, uye waterdrop notch.
Samsung Galaxy inowana 6.5-inch TFT Infinity-V HD + kuratidza ine resolution ye720 × 1,600 pixels uye 20: 9 factor ratio. Inofambiswa neocta-core processor, pamwe ne3GB / 4GB / 6GB RAM uye 32GB / 64GB / 128GB sarudzo dzekuchengetedza. Iyo yekuchengetera yemukati inowedzerwa kusvika ku1TB kuburikidza neiyo microSD kadhi slot. Bhatiri ndeye 6,000mAh imwe ine rutsigiro rwe15W inokurumidza kuchaja.
Iyi inyowani SIM smartphone uye inomhanyisa iyo UI yekambani, iyo yakavakirwa Android 10. Inowana makadhi-kumashure makamera, mubatanidzwa we 48-megapixel primary sensor ine f / 2.0 aperture, 5-megapixel yechipiri ultra -iyo yakazara sensor ine f / 2.2 aperture uye 123-degree munda-we-maonero (FoV), 2-megapixel macro kamera, uye yechina 2-megapixel yakadzika sensor. Samsung Galaxy M12 inoratidzira 8-megapixel yekumberi kamera ine f / 2.2 aperture.
Kubatanidza sarudzo pachigadzirwa kunosanganisira Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5.0, GPS / A-GPS, USB Type-C, uye 3.5mm headphone jack. Sensors dzinosanganisira accelerometer, ambient mwenje, uye proximity sensor. Iyo smartphone yemitambo iri padivi-yakagadzika chigunwe chigunwe sensor.
Samsung Galaxy M12 ndiyo inotsiva Galaxy M11, yakatangwa munaKurume gore rapfuura. Inotamba 6.4-inch HD + kuratidza uye inofambiswa neiyo Snapdragon 450 processor. Zvimwe zvinhu zvinosanganisira 5,000mAh bhatiri, katatu kumashure kamera setup, uye inowedzerwa chengetedzo inosvika ku512GB kuburikidza neiyo MicroSD kadhi.